Eriksen Oo Bilaash Ugu Biiraya Real Madrid Haddii Pogba Uu Heshiis Cusub Saxiixo & Wararkii Kale Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah - Gool24.Net
Eriksen Oo Bilaash Ugu Biiraya Real Madrid Haddii Pogba Uu Heshiis Cusub Saxiixo & Wararkii Kale Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah
Hadaba waxaa maanta oo Talaado ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada Yurub ka soo baxa:
Real Madrid ayaa u isku dayi doonta inay la soo wareegto xiddiga khadka dhexe ee Tottenham Christian Eriksen xagaaga danbe haddii Paul Pogba uu qandaraaska u kordhiyo Manchester United. Eriksen oo 27 sanno jir ah ayaa si bilaash ah lagula wareegi karaa madaama uu qandaraaskiisa Spurs dhacayo Juun 2020. (Sky Sports)
Daafaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa kula taliyay Paul Pogba inuu isaga tago Manchester United oo uu u wareego kooxda Isbaanishka. (Daily Express)
Kooxda Juventus ayaa diiday inay 28 jirka garabka ka ciyaara Douglas Costa iibiso inkastoo ay si xoogan u xiiseyneysay kooxda Manchester United ka dib markii uu tababaraha Juventus Maurizio Sarri is hotaagay in la iibiyo xiddiga reer Brazil. (Daily Mail)
Chelsea ayaa wadahadalo la furatay daafaca garabka ka ciyaara ee Talyaaniga Emerson oo 25 sanno jir ah iyagoo doonaya inay qandaraas cusub ka saxiixaan. Xiddiga garabka ka ciyaara ee England Callum Hudson-Odoi ayaa isna ku dhow inuu qalinka ku duugo heshiis cusub oo shan sannadood ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 180 kun ginni. (Daily Express)
Tottenham ayaa rag indha indheeyayaal ah u dirtay inay soo daawadaan weeraryahanka Fenerbahce Vedat Murigi oo 25 sanno jir ah kaasoo caawa u ciyaaraya xulka Kosovo. Waxaa sidoo kale xiddigaan daawanaya kooxaha Lazio, Fiorentina iyo Napoli. (FourFourTwo)
Goolhayaha Manchester United David de Gea oo 28 sanno jir ah ayaa ku dhow inuu ogolaado heshiis cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo mushahar bilow ah oo gaaraya 290 kun ginni isagoo la mid noqonaya Paul Pogba. (The Guardian)
Tottenham ayaa dooneysay inay la wareegto xiddiga khadka dhexe ee Roma Nicolo Zaniolo oo 20 sanno jir ah sida uu sheegay wakiilka ciyaaryahanka ka hor inta aysan amaah kula soo wareegin Giovani Lo Celso. (Daily Mail)
Chelsea ayaa wakiilo u sheegtay inay diyaar u yihiin inay ciyaartoy soo iibsadaan bisha Janaayo iyagoo rajeynaya in xayiraada suuqa kala iibsiga laga qaado waqtigaas. (Daily Mirror)